ဦးကိုနီအား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ရန် စေခိုင်းခဲ့သူမှာ တပ်မတော်တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ အောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar President Office ရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဦးကိုနီအား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ရန် စေခိုင်းခဲ့သူမှာ တပ်မတော်တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ အောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar President Office ရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်
ဦးကိုနီအား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ရန် စေခိုင်းခဲ့သူမှာ တပ်မတော်တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ အောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar President Office ရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်
February 15, 2017 February 15, 2017 drkokogyi
Min Min Latt is feeling thoughtful.
ကဲ… ဒါဆိုရင် ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ကိုရော ဘယ်သူကခိုင်းတာလဲ …..
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် နှုတ်ထွက်ခဲ့ပီး တပ်မတော် တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ အောင်ဝင်းခိုင်မှာ အကြမ်းဖက်သမားကြည်လင်းအား ငွေကျပ်သိန်း ရှစ်ရာပေး၍ စေခိုင်းခဲ့ သူ ဖြစ်ပြီးတရားခံ အောင်ဝင်းဇော်၏အစ်ကိုတော်စပ်သူလည်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှူ့ကျူးလွန်ရန်
ငွေပေးစေခိုင်းခဲ့သူ အောင်ဝင်းခိုင် နှင့် ဆက်စပ်တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် အဖွဲ့က စစ် ဆေး ဖေါ်ထုတ်လျှက်ရှိကြောင်း ပြည်သူကို အသိပေးသည့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှု့ ဖြစ်စဉ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၂) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
← တရုတ် တရုတ် ပြေး ပြေး။ မဘသရဲ့ သတ္တိသွေး
Assassination of Padoh Mann Sher had changed my relations with the Burma Digest →
5 thoughts on “ဦးကိုနီအား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ရန် စေခိုင်းခဲ့သူမှာ တပ်မတော်တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ အောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar President Office ရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်”
Aung Myint Min အောင်ဝင်းခိုင်က
ဆက် လိုက်ရမဲ့ ကွင်းဆက်
ကျနော်တို့လူထုအများစုကြီးကလည်း တထစ်ချတွက်ပြီးသားပါ။ ဦးကိုနီကို သိန်းထောင်ဂဏန်းသုံးပြီး သတ်ခိုင်းမယ့် သူတွေဟာ သတ်ခိုင်းမယ့် အသိုင်းအဝိုင်းဟာ ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းလည်းဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေလည်းဆိုတာ. . . ။
အမှန်တရားအတွက် တရားဥပဒေဘောင်ထဲကနေ လက်နက်မဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက် ဥပဒေပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ သတ်ခိုင်းတာဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားလည်းနတ္တိ သောက်ရှက်လည်းမရှိ သတ္တိလည်းမရှိတဲ့အပြင် အခုနောက်ဆုံးသတင်းအရ သိရတာက ထွက်ပါပြေးနေသေးတယ်တဲ့ အဲ့လိုကောင်တွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြုတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်က လူ့တိရစ္ဆာန်တွေဆီမှာပဲ ရှိလိမ့်မယ်။
ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်မှာ ကြည်လင်းလိုလူတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။
အားလုံးလည်း သိကြတဲ့အတိုင်း လှေဝမ်းဖောက်နေတဲ့ကောင်တွေကို။
အဲ့ဒီကြည်လင်းလို ကောင်တွေဟာ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ရော ယူနီဖောင်းမျိုးစုံ ဝတ်ပြီးရောရှိနေကြတယ်။
သူတို့ကိုကျောထောက်နောက်ခံပေးထားကြတဲ့သူတွေကလည်း ကြည်လင်းကို ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးကြတဲ့ သူတွေလိုပဲ အသိုင်းအဝိုင်းလိုပဲဆိုတာ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဖော်ပြစရာလိုအပ်မယ်မထင်ပါ။အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။
46 mins · Yangon, Myanmar ·
ဘာ ဟောင်း…ညာ ဟောင်း…လို့ ရေး ကြ ရင်…
အ မှု ဖြစ်..အ လုပ် ပြုတ် တဲ့ လူ ကို…ရေး လေ့ ရေး ထ..ညွှန်း လေ့ ညွှန်း ထ ရှိ သ ဗျ…
သာ မန် အ လုပ် ထွက် ရင် တော့…များ သော အား ဖြင့် အ ပြည့် မ ဟုတ် တောင်…တ ပိုင်း တ စ..အ ငြိမ်း စား လ စာ ရ ကြ ..
တော့….ဘာ အ ငြိမ်း စား..ညာ အ ငြိမ်း စား….လို့…ရေး လေ့…ရေး ထ…ရှိ ပါ တယ်…
ခု တ လော သ တင်း တွေ ဖတ် ရ တာ….အ သုံး အ နှုံး မှား နေ သ လို ပါ ဘဲ….
To cover up the track, shy, to save their name, to save their name of their organization.
Hmu Khant Htway
နောက်ဆုံးတော့လဲ ချေးခြောက် ရေနူးတာပဲပေါ့လေ…. ထိုးကြွေးပြီပေါ့လေ…. ယုတ္တိရှိအောင် ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး အဆင့် ထိုးကြွေးပြီပေါ့လေ … ဟိုဟာသလေးတခု သတိရမိတယ် မှားရင် ပြင်ပေးကြပါနော်… တူရကီဗိုလ်ချုပ်ရယ်…. အမေရိကန် ဗိုလ်ချုပ်ရယ်လား မသိ ပြီးတော့ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရယ် လေယာဉ် တစီးထဲ အတူပေါ့လေ…. အဲ့မှာ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ တူရကီ ဗိုလ်ချုပ်က စားနေတဲ့ Cheese တုံးကို လေယာဉ်ပေါ်က လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်.. ပြီးတော့ ပြောတယ် တူရကီမှာ အဲ့လို cheeseတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ပြောတယ်…. အဲ့လိုပဲ အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကလည်း လုပ်တာပေါ့… အဲ့တာကို မြန်မာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကလည်း အားကျမခံ ” ဗိုလ်မှူး တယောက်လာခဲ့စမ်း” ဆိုပြောပြီး လေယာဉ်ပေါ်က ကန်ချလိုက်တယ်…. အဲ့တော့ ကျန်တဲ့သူတွေကမေးတော့ ပြန်ဖြေလိုက်ပုံက
” မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လို ဗိုလ်မှူးတွေ အများကြီး ရှိတယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်လေ … အခုက အဲ့လို ဖြစ်ရပ်နဲ့ အတောကို ဆင်တူနေပါတယ်